धारामा बरफ जमेपछि कर्णालीकाे जनजीवन कष्टकर
On: २०७७ पुष १४ गते, मंगलवार, १०:०७ बजे प्रकाशित
कर्णाली। साविकको कर्णालीका नागरिकलाई कठ्याङ्ग्रिने जाडोले अत्यधिक सास्ती दिन थालेको छ। मङ्सिरयता चिसो बढ्दै गएपछि विशेषगरी जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पाका नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको हो।
कालिकोट, जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका उत्तरी भेगमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकसमेत चिसोले प्रभावित बनेका छन्। जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम यतिबेला माइनस ८.५ डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। जाडो बढे पनि साविकको कर्णालीका कुनै जिल्लामा वर्षा तथा हिमपात नभएको हावापानी फिल्ड कार्यालय जुम्लाका प्रमुख आशामपुरा कार्कीले जानकारी दिए। “चिसो बढ्ने क्रम जारी छ”, प्रमुख कार्कीले भने, “हिमपात भने भएको छैन। यद्यपि, यहाँका नागरिकको जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ।” कठ्याङ्ग्रिने जाडो नघट्दासम्म हिमाली बासिन्दाको खासगरी बिहान र बेलुकाको दैनिकी अझ बढी कठिन हुने कार्यालय प्रमुख कार्कीले जनाए।
जाडो बढ्दै जाँदा खानेपानीका धारामा बरफ जमेर पानी आउन छाडेको छ। मोटरसाइकल गाडीमा पेट्रोल डिजेल जम्दा सञ्चालमा ल्याउन सकस भएको छ। यसले गर्दा यातायात व्यवसायीलाई पनि सेवा प्रवाह गर्न गाह्रो भएको यातायात व्यवसायी ज्वारीलाल भट्टराईले बताए। शौचालयका धारा बन्द भएपछि नागरिकलाई शौच गर्नसमेत कठिनाइ भएको छ।
चिसोले पानीका पाइप फुट्न थालेका छन्। मुख्यतयाः मानव जीवनका लागि दैनिकरूपमा नभई नहुने पिउनेपानी आउन छाडेपछि यहाँका नागरिकले बढी सास्ती खेप्नुपरेको खलङ्गा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पन्नाबहादुर रोकायले जानकारी दिए। “हाम्रो काम उपभोक्ताको धारामा पानी पठाइदिने हो। पाइप भाँचिए टुटेफुटेको अवस्थामा मर्मत गरी पानी पठाएकै छौँ”, अध्यक्ष रोकायले भने, “बरफ बनेर बन्द भई धारामा पानी नआउनु प्राकृतिक अवस्था हो। यसमा हामीले के नै गर्न सक्छौँ र ? ” करिब दुई हजार उपभोक्तामार्फत २२ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई खानेपानी सेवा दिइरहेको उनको भनाइ थियो।
त्यतिमात्र होइन, घरमा राखिएका ग्यास सिलिण्डर पनि जम्न थालेको चन्दननाथ नगरपालिका–६ जुम्लाका स्थानीय पदमलाल महतले राससलाई जानकारी दिए। “गाउँका स्थानीयवासी दाउरा बाल्ने भएकाले केही सहज भए पनि हामी बजारमा बस्नेलाई अहिले निकै गाह्रो भइरहेको छ”, महतले भने, “जमेको धारामा तातोपानी खन्यायो भने बरफ पग्लिएर पानी आउँथ्यो तर दाउरा छाडेर बाल्दै आएका सिलिण्डर ग्याससमेत जमेपछि झन् ठूलो सङ्कट निम्तिएको छ।”
धारामा बरफ जम्दा घरमा न पानी छ न त आगो बाल्ने दाउरा छ। सिलिण्डर ग्यासको विकल्पमा दाउरा खोज्नुपर्ने त्यहाँ बाध्यता आइलागेको छ। धारा र पाइपमा बरफ जमेपछि स्थानीयवासी पानी जोहोका लागि प्राकृतिक मूल खोजी गर्न थालेका छन्। “जमेको पानी पग्लाउन आगो बालेर पानी तताउनुहुन्थ्यो तर धाराबाटै पानी खस्न छाडेपछि के तताउने ? स्थानीय सविना शाहीले भनिन्, “तताउनका लागि दाउरा छैन। सिलिण्डरको ग्यास पनि फ्रिज भएको छ।”
अन्य सम्बन्धित समाचार: कारागारमा कैदी क्षमताभन्दा बढी, व्यवस्थापनमा समस्या
मूलमा पानी नजम्ने भएकाले त्यस्ता स्रोत नजिक भएका गाउँहरुलाई सजिलो भएको शाहीले जनाए। उनले भने, “घरमा पानी नआउँदा मूल नजिकै बनाइएका परम्परागत काठ तथा ढु्ङ्गेधारा धाउनुपरेको छ। मेलापात, धारा, पानी पँधेरामा महिला सहभागी हुने भएकाले यसको बढी सङ्कट पनि महिलाले नै भोग्दै आएका छन्।”
चिसोले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी बढी प्रभावित भएका छन् । यो समयमा दम, निमोनिया, रुघाखोकी, कोल्ड डाइरियाका रोगी अस्पतालमा बढी आउने गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका डा अर्जुनप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए।
“यतिबेला ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र बच्चा अस्पतालमा बढी आउने गरेका छन्”, डा तिवारीले भने, “चिसोले ‘अपरेसन थियटर’मा बेहोस बनाएर उठाउँदा अलि कठिनाइको महसुस हुन्छ।” उनले यो समयमा सबैले आफूलाई न्यानोमा राख्न, झोलिलो चिज खान र ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई बरफमा लड्नबाट जोगाउन सल्लाह दिएका हुन्।
२०७७ पुष १४ गते, मंगलवार, १०:०७ बजे प्रकाशित